Iindaba - Icandelo lezoShishino lwezoNyango kwi-Outlook Y2021- Y2025
Icandelo lezonyango laseTshayina lihlala lilicandelo elihamba ngokukhawuleza kwaye ngoku likwindawo yesibini yentengiso enkulu kwezempilo emhlabeni. Isizathu sokukhula ngokukhawuleza kukuba inkcitho eyandayo yezempilo kwisixhobo sezonyango, amayeza, isibhedlele kunye neinshurensi yokhathalelo lwempilo. Ngaphandle koko, abadlali abaninzi be-domesitic bangena kwimarike kwaye abadlali abaphambili bayiguqula ngokukhawuleza itekhnoloji esele ikhona kunye nokuyila iimveliso ezintsha.
Ngenxa yeCovid-19, i-China ikwixesha lokukhula ngokukhawuleza kweemveliso zesixhobo sonyango ngenjongo yokufumana uphawu lwangaphambili. Kwangelo xesha, iimveliso ezintsha kunye neetekhnoloji zonyango ezintsha zihlala zaziswa kwimarike eqhuba ukukhula ngokukhawuleza kweshishini lezixhobo zonyango, ngakumbi ukukhula ngokukhawuleza kweenkampani eziphambili kwicandelo ngalinye.
Kwiminyaka yakutshanje, i-China ingene kwixesha lokuphuhliswa kwemveliso kunye nokuphuculwa kwetekhnoloji, njengesixhobo esinokuboliswa ziintsholongwane esisungulwe nguLepu Medical, umbhobho we-IVD osungulwe nguAntu Biotech kunye neMindray Medical, kunye ne-endoscopy eveliswe yathengiswa yiNanwei Medical. Iimveliso ezinemibala ephezulu ye-ultrasound eveliswe yiMindray Medical kunye neKaili Medical, kunye nezixhobo ezikhulu zokucinga nge-United Imaging Medical zinakho ukuhlengahlengisa iimveliso eziphakathi kunye neziphezulu zokungenisa ngaphakathi kumhlaba wazo, ngaloo ndlela zenza amandla aphakathi ukutsha kunye nokuphuculwa kwezixhobo zonyango zase China. .
Kwi-2019, izixhobo zonyango zaseTshayina ezidwelisiweyo zinendawo enkulu yengeniso. Iinkampani ezingama-20 ezidwelisiweyo ezinengeniso ephezulu yiMindray Medical, ingeniso efikelela kwi-16.556 yezigidigidi, kunye nenkampani enexabiso eliphantsi yiZhende Medical, enengeniso ejikeleze i-yuan eyi-1.865 yezigidigidi. Izinga lokukhula kwengeniso yeTop20 edwelisiweyo yengeniso yonyaka-ngonyaka-kwinqanaba ngokubanzi likwinqanaba eliphezulu. Iinkampani ezingama-20 ezidwelisiweyo kwingeniso zihanjiswa ikakhulu eShandong, eGuangdong naseZhejiang.
Inani labantu base China elikhulayo likhula ngokukhawuleza kunalo naliphi na elinye ilizwe emhlabeni. Ngabantu abagugayo ngokukhawuleza, ukwanda kokungena kwezinto ezisetyenziswayo ezikhutshiweyo ngokudibeneyo kukhuthaze ukukhula okukhawulezileyo kwezixhobo zentengiso ezilahlwayo.
Umhlaza kunye nenqanaba lezifo zentliziyo ziyaqhubeka nokukhula kwaye ukusetyenziswa kokuvavanywa okuphuculweyo kwiklinikhi kuyaqhubeka nokukhula, okunyusa ukusetyenziswa kwezinto eziphezulu zoxinzelelo lwe-radiography. Izinga lokuskena liqikelelwa ukufikelela kwizigidi ezili-194 ngo-2022 xa kuthelekiswa nezigidi ezingama-63 ngo-2015.
Ukuchongwa ngokuchanekileyo kufuna ukucaciswa okuphezulu kunye nokuchaneka kwetekhnoloji yokucinga.
Omnye umgaqo-nkqubo wezixhobo zorhwebo uhlaselo lucaphukisa kwiNqaku lama-35 lemiThetho yoLawulo noLawulo lwezixhobo zezoNyango. Imisela ukuba ukusetyenziswa kwezixhobo zonyango ezizodwa akusayi kusetyenziswa rhoqo. Izinto ezilahlwayo ezisetyenzisiweyo kufuneka zitshatyalaliswe kwaye zirekhodwe ngokwemigaqo.Ukuvinjelwa kwezinto ezilahlayo ezisetyenziswayo kuthintela ezinye izibhedlele ekusebenziseni kwakhona uxinzelelo oluphezulu lwee-rayography ukonga iindleko.
Ngokusekwe kwezi ntsingiselo zingasentla, ishishini lezixhobo zonyango liphantsi kwenguqu enkulu. Izinga lokukhula kombumba lonyaka li malunga neepesenti ezingama-28. I-Antmed yiyo ekhokelayouxinzelelo lwesirinji ephezulu ukwenziwa e-China kwaye sityala imali kakhulu kwinkqubo ye-R & D. Sinethemba lokwenza igalelo kumzi mveliso wezonyango waseTshayina kunye nokugcina isikhundla sethu senkokeli kushishino.